Asa 5 - Ny Baiboly
Asa toko 5
Ny amin'i Anania sy Safira - Mitombo isa ny mpino - Ny nanaovana ny Apostoly rehetra tao an-tranomaizina sy nanafahan'ny anjely azy - Ny nanadinan'ny Sanedrina azy sy ny valy nataon'i Piera.
1Ary nisy kosa lehilahy anankiray atao hoe Anania, sy Safira vadiny, nivarotra tany, 2nefa nanafenany ny vidin'ny tany, araka ny tetika iraisan'izy mivady, vao nentiny napetraka teo an-tongotry ny Apostoly ny vola sisa. 3Fa hoy Piera: Ry Anania, nahoana Satana no nameno ny fonao handainga amin'ny Fanahy Masina, ka hanafina ny vola sasany amin'ny vidin'ny tany? 4Fony mbola tsy namidy izy, moa tsy anao va? Ary nony efa namidy indray moa tsy anao koa va ny vidiny? Ka ahoana no dia nahavitanao hevitra toy izao? Tsy olombelona no nandainganao, fa Andriamanitra. 5Nony nandre izany teny izany Anania dia lavo, ka afaka ny ainy; ary raikitahotra izay tsy izy izay rehetra nandre izany. 6Dia nitsangana ny tovolahy, nofonosiny ny fatiny, ka nentiny nalevina.
7Nony afaka tokony ho adim-pamantaranandro telo, dia inty tamy koa ny vavy, tsy nahalala izay nanjò teo akory. 8Ka hoy Piera taminy: Lazao amiko, moa izany ihany va no nivarotanareo ny taninareo? Eny, izany ihany, hoy izy. 9Dia hoy Piera taminy: Nahoana hianareo no niray tetika haka fanahy ny Fanahin'ny Tompo? Indro mby eo am-baravarana ny tongotr'izay nandevina ny vadinao, ka hitondra anao koa. 10Niaraka tamin'izay dia lavo teo an-tongony izy, ka afaka ny ainy. Ary nony tafiditra ny tovolahy, dia hitany fa maty izy, ka nantiny naleviny tany anilan'ny lahy. 11Dia raiki-tahotra mafy ny Eglizy manontolo sy izay rehetra nandre izany.
12Betsaka ny famantarana sy fahagagana natao teo amin'ny vahoaka, tamin'ny tànan'ny Apostoly. Niara-nipetraka teo ambanin'ny lavarangan'i Salomona ny mpino rehetra, 13ary tsy nisy olon-kafa sahy nikambana tamin'izy ireo; nefa ny vahoaka nankazala azy. 14Nitombo isa isan'andro vaky ny olona izay nino ny Tompo, na lahy na vavy, 15ka dia nentiny teny an-dàlambe aza ny marary ka napetrany teo ambony farafara na tsihy fandriana, mba hisy ho azon'ny tandindon'i Piera ahay, raha mandalo izy. 16Maro koa ny olona nidodododo nankao Jerosalema avy tamin'ny tanàna manodidina nitondra ny marary sy izay nampahorin'ny fanahy maloto, ary sitrana avokoa izy rehetra.
17Tamin'izay dia nentin'ny fialonana ny lehiben'ny mpisorona sy ny mpiandany aminy, dia ny Sadoseana ireo, ka nisafoaka. 18Nasainy nosamborina ny Apostoly, dia nataony an-tranomaizina. 19Fa nony alina kosa dia nisy anjelin'ny Tompo namoha ny varavaran'ny tranomaizina, ka nitondra azy nivoaka sy nanao hoe: 20Mandehana mankao amin'ny tempoly, ka torio amin'ny vahoaka ny teny rehetra, ny amin'izany fiainana izany. 21Rahefa nandre izany izy ireo, dia niditra marainakoa tao amin'ny tempoly ka nampianatra. Tonga kosa ny lehiben'ny mpisorona sy izay nomba azy ka namory ny Sanedrina mbamin'ny loholona rehetra tamin'ny zanak'Israely, ary naniraka nankao amin'ny tranomaizina haka ny Apostoly.
22Dia nandeha ny iraka, nefa tsy nahita azy ireo tao an-tranomaizina intsony, ka lasa niverina nilaza izay hitany hoe: 23Hitanay fa ny tranomaizina dia mihidy tsara, ary ny mpiambina nitsangana teo am-baravarana; kanjo nony novohanay, tsy nisy olona tao anatiny. 24Vaka dia vaka ny lehiben'ny mpiambina ny tempoly sy ry zareo lehiben'ny mpisorona nony nandre izany, satria tsy takany velively izay tokony ho nahatonga izany. 25Fa tamin'izay kosa inty nisy olona anankiray tonga nilaza tamin'izy ireo hoe: Indreo ry zareo nataonareo an-tranomaizina ireny ao an-tempoly ao, sady mampianatra ny olona. 26Dia lasa naka azy ny lehiben'ny mpiambina ny tempoly sy ny namany, nefa tsy nanao an-keriny fa natahotra sao hotorahan'ny vahoaka vato.
27Dia nentiny izy ireo ka napetrany tao amin'ny Sanedrina, sy nadinin'ny lehiben'ny mpisorona hoe: 28Efa noraranay mafy hianareo mba tsy hampianatra amin'izany anarana izany, kanjo vao mainka naelinareo eran'i Jerosalema ny fampianaranareo, ary izahay indray tadiavinareo hianjeran'ny ran'iny Lehilahy iny. 29Fa namaly Piera sy ny Apostoly ka nanao hoe: Aleo manaiky an'Andriamanitra toy izay ny olombelona. 30Natsangan'Andriamanitry ny razantsika tamin'ny maty Jesoa, izay novonoinareo nahantona tamin'ny hazo. 31Izy nasandratry ny tànana an-kavanan'Andriamanitra ho Mpifehy sy Mpamonjy, mba hanome fibebahana sy famelan-keloka an'Israely. 32Ary izahay sy ny Fanahy Masina nomen'Andriamanitra an'izay rehetra manaiky azy no vavolombelon'izany zavatra izany.
33Nisafoaka izay tsy izy ry zareo tamin'ny fandrenesana izany ka nifanara-kevitra izy fa hamono azy. 34Fa nitsangana teo amin'ny Sanedrina kosa ity Farisiana anankiray atao hoe Gamaliely, mpampiana-dalàna malaza tamin'ny vahoaka rehetra, ka nasainy navoaka kely ny Apostoly. 35Dia hoy izy: Ry Isrealita, tandremo ihany izay hataonareo amin'ireo lehilahy ireo. 36Fa tsy ela akory izay no nisehoan'i Teodasy izay nanao ny tenany ho zavatra, sady efa nisy tokony ho efa-jato lahy no nomba azy; kanjo nony novonoina izy, dia nihahaka izay rehetra nanaraka azy ka tonga tsinontsinona. 37Taorian'izany indray, tamin'ny andro nanoratana ny vahoaka, dia nitsangana koa i Jodasy avy any Galilea nitarika ny vahoaka hanaraka azy: kanjo nony novonoina izy, dia nihahaka ihany koa izay rehetra nomba azy. 38Koa ankehitriny, izao no hevitra omeko anareo: aza manan-draharaha amin'ireo lehilahy ireo akory, fa avelao izy handeha; satria raha avy amin'olona izao hevitra na raharaha izao, dia ho foana ho azy; 39fa raha avy amin'Andriamanitra kosa, tsy ho hainareo foanana velively, sao dia miseho ho mpiady amin'Andriamanitra hianareo.
40Dia narahin'izy ireo izany toroheviny izany ka nantsoiny indray ny Apostoly, ary nony efa nasainy nokapohina tamin'ny tsora-kazo sy noraràny mafy tsy hiteny amin'ny anaran'i Jesoa intsony, dia nalefany. 41Nony niala tamin'ny Sanedrina ny Apostoly, dia nandeha an-kafaliana, satria natao ho mendrika ny hitondra fahafaham-baraka noho ny anaran'i Jesoa. 42Ary tsy nitsahatra ny nampianatra sy nitory isan'andro tao an-tempoly sy tany an-tranon'olona izy ireo fa Jesoa no Kristy. >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.0211 seconds